Depiote Tim : Matahotra fifidianana -
AccueilSongandinaDepiote Tim : Matahotra fifidianana
23/06/2018 admintriatra Songandina 0
Efa filàna antsonjay tsotra izao. Nodradradradrain’ireo depiote avy amin’ny antoko Tim tetsy amin’ny Parvis-n’ny Lapan’ny Tanàna Analakely indray omaly fa tsy manaiky fifidianana izy ireo raha tsy miala amin’ny toerany ny Ceni, ary miala avokoa ireo sefo fokontany.
Hita mibaribary amin’izany fa fatahorana fifidianana no ambadik’ilay fanambarana atao etsy Analakely. Lasa mihitatra toa ny sima misioka ilay fangatahana, ary miseho lany mihitsy ny an’ireto depiote Tim, hany sisa tavela tamin’ny depiote ho an’ny fanovana na depiote 73 niara-nitolona tamin’izy ireo.
Fony mbola tafaraka sy niaraka tamin’ny depiote avy amin’ny antoko Mapar mantsy, dia nitovy sy niraisana ny tanjona tamin’izany tamin’ny alalan’ny fitadiavan-tseza. Samy nahazo ny anjara mofomamy anefa, na ny Tim na ny Mapar, ka samy manana olona ao anatin’ilay governemantan’ny marimaritra iraisana.
Ankehitriny, nanapa-kevitra ny tsy hiaraka amin’ny Tim etsy amin’ny Parvis-n’ny Lapan’ny Tanàna Analakely intsony ny avy amin’ny Mapar ary tsy hanohy ny tolona intsony, raha ny nambaran’ny filohany Andry Rajoelina. Ny Tim anefa amin’izao fotoana izao, dia tsy manaiky ny hanajanona ny tolona raha tsy miala ny Ceni na ny Vaomiera mahaleotena mikarakara ny fifidianana sy ireo sefo fokontany. Tsy fantatra mazava ary tsy fantatr’ireo mpomba azy sy mpanaraka azy ireo etsy Analakely akory anefa izay tena anton’ilay fitakiana. Vokisana lainga hatrany ireo mpanara-dia azy ireo fa mpiray tsikombakomba amin’ny Fitondrana ireo sefo fokontany sy ny Ceni. Mpiray tsikombakomba amin’ny ahoana tokoa moa izany izy ireo. Samy mahafantatra tsara anefa ny rehetra fa samy manana ny andraikitra sahaniny ny tsirairay, na ny Fitondrana, na ny Ceni sy ireo sefo fokontany.
Ankoatra izay, tsy misy antony tokony hanesorana ny Ceni sy ireo sefo fokontany amin’ny andraikitra sahaniny. Ny governemanta rahateo dia ny mikarakara ny fifidianana sy mametraka fitoniana eto amin’ny firenena no tena andraikiny sy ny iraka ampanaovina azy.
Terena ho lany Rajoelina : Manao tsindry mafy ny praiminisitra
Efa tsy takona hafenina intsony, ankehitriny, ny fomba ratsy sy ny fomba fanaovana politika maloton-dry Andry Rajoelina, kandidà laharana faha-13 amin’ny fifidianana Filoham-pirenena, fihodinana faharoa, sy ny forongony. Amin’izao fotoana izao, miharihary toa ny vay ...Tohiny